संपर्क लेंस मात्र सौन्दर्य लागि, तिनीहरूले पनि दृष्टि लागि उपयोगी छन् आवश्यक छ। यो वैकल्पिक अंक, तिनीहरूले, दृष्टि ठीक बाहेक मदत रूपमा, मान्छे लेंस प्रयोग र आँखाको रंग परिवर्तन गर्न। संपर्क लेंस को धेरै सकारात्मक फाइदा तिनीहरूलाई लोकप्रिय बनाउन।
आँखा लागि नरम hydrogel लेंस
विशेष गरी लोकप्रिय संपर्क लेंस इरादा गर्दै दिनमा प्रयोगको लागि, मासिक Proclear छन्। यसलाई जो एक विशेष hydrogel उपयोग गर्छ निर्माण को लागि एक गुणवत्ता उत्पादन हो। मिति, धेरै प्रयोगकर्ताहरू ठ्याक्कै त्यस्तो लेंस, अपवर्तन को एक विस्तृत श्रृंखला (-20.0 20.0 गर्न) धन्यवाद चयन गर्नुहोस्। आकर्षित र हाइड्रोजन बन्धन मार्फत पानी अणु राख्ने जो एक hydrogel, संग phosphorylcholine - उत्पादन पीसी प्रौद्योगिकी र अद्वितीय सामाग्री भनिने विशेष प्रविधि प्रयोग गर्दछ।
संपर्क लेंस को अप्टिकल बजार मा Proclear 2004 देखि शीर्ष बाँध्न कब्जा। तिनीहरूले लोकप्रियता र वफादार ग्राहकहरु योग्य। अनुभवी प्रयोगकर्ता यी उत्पादनहरु आवश्यक संवेदनशील र सावधान मनोवृत्ति थाहा छ।
संपर्क लेंस Proclear को विशेषता सुविधाहरू
उपभोक्ता छुट संपर्क लेंस Proclear (6 पीसी। प्याकेज मा), तिनीहरूले दैनिक प्रयोग महिनाको लागि डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। को चिस्यान सामाग्री - 8.6 - 62% व्यास 14.2, र को झुकाव को अर्धव्यास छ। निर्माता रूपमा मानव Tissues को आँखा गर्न सकेसम्म नजिक को संरचना, त्यसैले बहिष्कृत बेचैनी वा एलर्जी प्रतिक्रिया संग एक उत्पादन सिर्जना गरेको छ। लेंस जम्मा गर्न मात्र प्रतिरोधी, तर पनि राम्ररी कायम बाह्य वातावरण छैन। यो कार्यालयमा काम गर्ने मान्छे को लागि एक राम्रो विकल्प छ र कम्प्युटर मा धेरै समय बिताउनुभयो।
त्यसैले किशोरीहरूको र छोराछोरीलाई संपर्क लेंस Proclear प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Hypoallergenic कोटिंग, जलन पैदा गर्दैन। कृतज्ञ मान्छे को समीक्षा यस प्रमाण हो।
संपर्क लेंस Proclear एक विशिष्ट सुविधा
Proclear उत्पादनहरु छ एक ठूलो फाइदा - लगाउन त मान्छे जस्तै उत्पादनहरु राम्रो र सजिलो यो सुविधा छ। Biocompatible Proclear संपर्क लेंस एक विशेष कोटिंग, Hioxifilcon भनिन्छ जो छ।
यसको सुविधा सामाग्री प्राकृतिक संविधान तत्व squamous सेल झिल्ली हो, र यो सम्पत्ति अनुमति दिन्छ राम्रो पानी अवधारणा छ। तसर्थ, लेंस को मिति पछि मानव आँखा समारोह slezoproduktivnaya ग्रन्थीहरूको घट्छ जब समयमा नम बाँकी छन्।
संपर्क लेंस Proclear को मुख्य लाभ
अन्य उत्पादनहरु संग तुलना, सम्पर्क लेंस Proclear लाभ छ:
कारण अद्वितीय उत्पादन प्रविधि गर्न, तिनीहरूले कुनै पनि अवसरको लागि बेचैनी सिर्जना छैन।
एक विशेष कोटिंग लेन्सको biocompatible बनाउँछ, त्यसैले एलर्जी वा संवेदनशील आँखा भएका मान्छे हुन सक्छ उत्पादनहरु लगाउने।
जम्मा आदर सामाग्री स्थिर, hypoxia र कोर्नियल निर्जलीकरण को तथापि कुनै विकास। लेन्सलाई कि उत्पादनहरु नजरमा महसुस छैन त पातलो छ।
उत्पादन प्रयोग गर्न सकिन्छ पनि "सुक्खा आँखा" सिंड्रोम वा अन्य यस्तै समस्या भएको भएकाहरूलाई प्रयोगकर्ता द्वारा।
उत्पादन संपर्क लेंस Proclear -6पीसी। प्याकेजमा, प्रयोगकर्ता तीन महिनाको लागि पर्याप्त हुनेछ।
तिनीहरूले आँखा सास फेर्न गर्न अनुमति अक्सिजन अनुमति र चिस्यान को आवश्यक रकम समावेश।
सुक्खा आँखा हुन सक्छ, र यस्तो अतिरिक्त मइस्चराइजिंग घटेको वा चिल्लो अन्य विधिहरू, नामेट, तर यो सबै संपर्क लेंस बनाउन हुँदा र अन्य साधन आवश्यक छैन यो राम्रो हो।
सम्पर्क लेन्स हेरविचार Proclear
लेंस को उचित हेरविचार प्रयोग, साथै आँखा को स्वास्थ्य मा अवधि र सजिलो असर गर्छ। तिनीहरूलाई राम्ररी अनुगमन गर्न आवश्यक लागि भनेर उत्पादन को सतह मा भेला कुनै पनि जम्मा, लेन्सको को प्रदर्शन घटाउन। यो धूलो, रद्दीटोकरी कणहरु, कुनै पनि वायु प्रदूषण वा कस्मेटिक microparticles हुन सक्छ।
ठीक स्वच्छता पालन भने, त्यसपछि त्यहाँ जस्तै समस्या हो:
राता र आँखाको जलन।
निरन्तर त्यहाँ एक विदेशी शरीर छ आँखा मा भावना चिन्ता जाँदै।
प्रकाश उच्च संवेदनशीलता।
Proclear संपर्क लेंस नियम, हेरचाह लागि डिजाइन समाधान छ, शुद्ध र विशेष हालतमा प्रयोग moisturize, disinfected गर्नुपर्छ। लेंस साथै लामो र राम्रो प्रदर्शन गर्दै छन्, तपाईं हेरविचार को आधारभूत नियमहरू सम्झना गर्नुपर्छ।
पहिलो, गोली, लगाउने वा सफा लेंस सफा मात्र हात गर्नुपर्छ।
दोश्रो, संपर्क लेंस Proclear ट्याप वा र्याल पानी संग धोए गर्न सकिँदैन। को फोहोर तरल पदार्थ आँखा प्रवेश गर्ने निश्चित गर्नुहोस्।
तेस्रो, समाधान लेन्स मा6घण्टा भन्दा कम आराम गर्नुपर्छ। हरेक दिन प्रयोग तरल र विशेष कन्टेनर मात्र राम्रो नै हालतमा धुन, तर पनि सफाई पछि सुक्खामा छ। बालिका रहनसहन लागू गरिन्छ अघि लेंस राख्नु छन् कि सम्झना गर्न आवश्यक छ।
नियम को उत्सव कुनै स्वास्थ्य समस्या, र म्याद सकिने मिति गर्न लेंस को सहज प्रयोग सुनिश्चित गर्दछ।
आँखा को रोगहरु - निकट र hyperopia
पहेलो आँखा (आँखाको सफेद) के?
ब्याट्री चार्ज प्रकाश अप रोशनी: के गर्ने?
हाम्रो स्वास्थ्य। को कमर र तिध्रा बिचको भाग र योनी वरिपरिको गांठ
अनलक फ्लाई, एलजी, Explay, HTC कसरी अनलक गर्न, सोनी, DNS, Prestigio, TEXET र "मेगाफन"। सबै तपाईंले आफ्नो ढाँचा अनलक बारेमा जान्नु आवश्यक छ
मानिसहरूको पात्रो: मौसम, बिदा र भन्सार को संकेत